जब चिनियाँ विदेश मन्त्री सवार जहाज काठमाडौंको आकशमा घुमेको घुमेइ गर्यो, त्यसपछि के भयो ? – ताजा समाचार
जब चिनियाँ विदेश मन्त्री सवार जहाज काठमाडौंको आकशमा घुमेको घुमेइ गर्यो, त्यसपछि के भयो ?
काठमाडौँ । चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यी सवार डियर जेट काठमाडौं अवतरणका क्रममा १५ मिनेट होल्डमा परेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्रोतका अनुसार, मन्त्री वाङको बी–८१३५ उडान नम्बर भएको जेट विमान काठमाडौंमा अवतरण गर्ने तरखर गर्नु केही समय अघि मौसममा खराबी आएपछि आइतबार साँझ ५ बजेर ३२ मिनेटमा विमानस्थल बन्द गरिएको थियो । त्यस समयमा विमानस्थलको भिजिबिलिटी २ हजार मिटरमा खुम्चिएको थियो। विमानस्थल बन्द भए लगत्तै काठमाडौंदेखि २७ किलोमिटर पर उक्त जेट विमान होल्ड (आकासमै फन्को लगाउनु)मा परेको थियो।
उक्त विमान होल्डमा परेको आकाशको विन्दुलाई उड्डयनकर्मीले गुँरास नामले चिन्दछन्। उक्त जेट विमानले गुराँसमाथी तीन फन्को लगाएको थियो। मौसममा सुधार भएपछि ५ बजेर ४२ मिनेटमा धावनमार्ग खुला गरिएको थियो। विमानस्थलको भिजिबिलिटी ४ हजार मिटर भएपछि खुला गरिएको थियो। विदेशमन्त्रीको विमान ५ बजेर ५७ मिनेटमा काठमाडौं विमानस्थलमा अवतरण भएको थियो।
उक्त विमान आइतबार पाकिस्तानबाट भारतको लखनउको रुट हुँदै काठमाडौं आइपुगेको हो। यसअघि शुक्रबार यो विमान बेइजिङबाट सियान, छेन्दु, ल्हासाको रुट समातेर काठमाडौं माथीको आकास हुँदै भारतको लखनउ हुँदै पाकिस्तानस्थित इस्लामावाद पुगेको थियो। विदेश मन्त्री वाङले सोमबार र मंगलबारको अधिकांश समय राजनीतिक भेटघाटमा बिताउने छन् ।
आइतबार साँझ करिब ६ बजे उनी त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेका हुन् । उनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले स्वागत गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको औपचारिक निमन्त्रणामा १९ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै वाङ नेपाल आएका हुन् । उनको भ्रमणलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको सम्भावित नेपाल भ्रमणको पूर्वतयारीका रुपमा हेरिएको छ ।
विदेशमन्त्री वाङले आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । ती भेटहरुमा चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ ९बीआरआई०, चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा निर्माणाधीन परियोजनाबारे छलफल हुने परराष्ट्रमन्त्रालयले जनाएको छ । समकक्षी प्रदीप ज्ञवालीसँग भने चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भेटवार्ता सोमबार हुने छ ।
विदेशमन्त्री वाङलाई सोल्टी होटलमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आइतवार उनको कुनै भेटघाटको कार्यक्रम रहेको छैन । सोल्टी होटलमा नै विदेशमन्त्रि वाङलाई परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी र चिनियाँ दूतावासले औपचारिक कार्यक्रमबारे जानकारी गराउने छन् ।
सोमबार दिउँसो ३: ३० बजे होटल याक एण्ड यतीमा नेपाल चीन बार्ता हुनेछ । केहि सम्झौता र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पनि हुने कार्यक्रम छ । सोमबार साँझ ५ बजेदेखि ५: ४५ बजेसम्म विदेशमन्त्रि वाङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ। भेटघाटको कार्यक्रम बालुवाटारमा हुनेछ । सोमबार साँझ ६ बजेपछि विदेशमन्त्री वाङको टोली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शितल निवाशमा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नेछ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले समकक्षी यीको सम्मानमा सोमबार साँझ रात्रिभोजको आयोजना गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। रात्रिभोजमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू, दुवैतर्फका कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसहितका अधिकारी सहभागी हुने जनाइएको छ। भदौं २४ गते, मंगलबार ९:०० बजे वाङको टोलीले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
भदौं २४ गते, मंगलबार नै विदेशमन्त्री वाङको टोलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेर बहादुर देउबालाई निवाशमा भेट्ने कार्यक्रम छ । भेटको समय ११:०० बजेको लागि मिलाइएको छ। यस बाहेक विदेशमन्त्री वाङले केहि राजनैतिक विश्लेषक र उद्योगी ब्यबसायी सँग होटल सोल्टीमा भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। विदेशमन्त्री वाङको टोली मंगलबार १ बजे चीन फर्कने छ।
वाङको भ्रमण नेकपा सरकार गठन भएपछि चीनको तर्फबाट भएको उच्चस्तरीय भ्रमण हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको अघिल्लो कार्यकालमा पनि विदेशमन्त्री रहेका वाङ यसअघि सन् २०१४ मा नेपाल आएका थिए । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण उपयुक्त समयमा हुने भनिए पनि मिति निश्चित भइसकेको छैन ।
यसैगरी, विदेशमन्त्री यीले नेपालको विशेष प्राकृतिकस्थल भ्रमण गर्न चाहेकोमा सम्भवत मुस्ताङको जोमसोम जान सक्ने संभावना देखिएको छ। विदेशमन्त्रीको इच्छाअनुसार, सोमबार बिहान चार्टड फ्लाइटमा जोमसोम गएर काठमाडौं फर्कने प्रारम्भिक तयारी भइरहेको स्रोतले जानकारी दियो। ‘तर, मौसमको अनुकुल स्थिति हेरी जोमसोम यात्राको टुङ्गो लाग्नेछ,’ स्रोतले भन्यो। विदेशमन्त्री यी मंगलबार दिउँसो विशेष विमानबाट बेइजिङ फर्कनेछन्।